Kôpta (mponina) - Wikipedia
Ny Kôpta dia ny mponina kristiana ao Ejipta. Ny Fiangonana Kôpta Ôrtôdôksa no be mpanaraka indrindra nefa ahitana Fiangonana Katôlika Kôpta sy Fiangonana ara-Pilazantsara Kôpta koa ao. Ny Fiangonana Kôpta Ôrtôdôksa dia tsy afangaro amin' ny Fiangonana Etiôpiana Ôrtôdôksa. Noho ny fiteniny nampiasaina tamin' ny fotoana nidiran' ny fivavahana kristiana tao Ejipta, dia antsoina hoe kôpta ihany koa io fiteny io izay ampiasaina amin' ny fotoam-pivavahana ao amin' ny fiangonana misy ao.
Bibliografia[hanova | hanova ny fango]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kôpta_(mponina)&oldid=1012901"
Voaova farany tamin'ny 22 Jolay 2021 amin'ny 08:28 ity pejy ity.